Knowledge – XB Media Myanmar
ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးမှ ကင်းလွတ်အောင် ဘုရားရှင် သင် ပေး တော်မူခဲ့သော သစ္စာစကား
August 3, 2021 Bestie_Author
ယုံပါလို့မတိုက်တွန်းချင်ပါ သို့သော် ယုံအောင်တော့ ယုတ္တိသာဓကနှင့်တကွ ပြောပြပါ့မယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်ဆိုလျှင် လက်တွေ့အသုံးချကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဘာမှမပင်ပန်းသလို ငွေကုန်ကြေးကြလဲမရှိပါဘူး တစ်ခုပါ ပဲ.. ယုံကြည်မှုရှိရုံလေးဆိုရပါတယ် ..လောကီဘက်မှာတောင်မှ ကိုယ့်ခေါင်း ဆောင် ပြောတဲ့ ..စကားကို အသက်နဲ့လဲပြီးယုံကြည်သူတွေကို အ များ ..အပြားရှိတာကို အားလုံး တွေ့ဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ် မသေချာတဲ့ ပုထုဇဉ် ပြောတဲ့စကားကိုတောင်မှ အသက်ပေးပြီး ယုံကြည်ရင် ..သေချာတဲ့ ကိလေသာလုံးဝ ကင်းစင်တဲ့ အတုမရှိတဲ့ဗုဒ္ဓ ဂေါ တမတည်းဟူသော ခေါင်းဆောင်ကြီးပြောခဲ့တဲ့ ဟောခဲ့တဲ့ ပေးခဲ့တဲ့ .. လမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့ စကားကို ရင်ထဲမှာ နှစ်နှစ်ကာကာလေးလေ းစားစား အသက်တမျှ ယုံကြည်လိုက်ပါအရှုံးမရှိပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မည်သည့် အခက်အခဲပင်ဖြစ်စေကာမူ ကျော်လွားနိုင်အောင်လမ်းညွှန်မှုပေးထားတဲ့ နည်းလမ်း တွေအများကြီးရှိပါတယ် နောက်ဆုံး မီးနေခန်းထဲကအခက်အခဲကိုတောင်မှ ဖြေရှင်းပုံ ဖြေရှင်းနည်းကို ပေးခဲ့တဲ့ဘာသာပါ ..မသုံးတတ်လို့ မသိကြလို့သာ တန်ဖိုးထား ရ မှန်းမသိ တာပါ.. (၃၈) ဖြာ မင်္ဂလာတရားနဲ့တင် မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ အတုမရှိ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဆိုတာ နက်နက်တွေးလေ လက်ခံလေလေပါပဲ ..ခုလဲ မြန်မာပြည်မှာ သာ မက တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပါ ကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်နေပါတယ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေတော့ထားပါသူတို့က လောကီဖြေဆေး နောက်ကို အားသွန်ခွ…
ကိုဗစ်ကနေပြန်ကောင်းလာပြီး ဆေးရုံဆင်းတာနှစ်ပတ်ကျော်ပြီးမှ အဆုတ်မှာသွေးခဲပြီးသေဆုံ
July 24, 2021 Bestie_Author
ကိုဗစ်ကိုအနိုင်ယူပြီးလို့နလန်ထလာချိန်မှာ နောက်ဆက်တွဲသွေးခဲမှုပြဿနာနဲ့ သေဆုံးသူတွေများပြားလာပါတယ်။ကိုဗစ် ကနလန်ထပြီးချိန်မှာ ခရီးထွက်တာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ကိုဗစ်ကနလန်ထပြီးချိန်မှာ အားကစားလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ကိုဗစ်ကနလန်ထပြီးချိန်မှာ ဝရံတာ ထွက်ပြီးအအေးခံတာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ကိုဗစ်ကနလန်ထပြီးချိန်မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားမှု လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ စင်ကာပူမှာအသက် (၄၁) နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ကိုဗစ်ကနေပြန်ကောင်းလာပြီး ဆေးရုံဆင်းတာနှစ်ပတ် ကျော်ပြီးမှ အ ဆုတ်မှာသွေးခဲပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဆုတ်ထဲက pulmonary artery ထဲမှာ thromboembolism သွေးခဲလေးကသွားပိတ်တာပေါ့ဗျာ။ စင်ကာပူ NTU တက္ကသိုလ်က သုသေသနပညာရှင်များဟာ ကိုဗစ်ကနေပြန် ကောင်းလာ တာ တ စ် လလော က်ရှိပြီဖြစ် တဲ့ လူနာ အယောက် (၃၀) ကို သွေးနမူနာယူစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ သိပ္ပံဂျ ာနယ် eLife မှာတင်ပြ ထားရ ာမှာ အဲ့ဒီလူ နာအ ယေ ာက် (၃၀) စလုံ းမှာ သွေ းကြေ ာတွေပျက်စီးထားတာတွေ့ရပါတယ်တဲ့။ဒါဟာ ကိုဗစ်ကိုပြန်တို က်ရင်း lingering immune response က နေ သွေးခဲလေး တွေဖြစ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်တဲ့ အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုဗစ်ကိုတိုက်ရင်း ရှိနေတဲ့သွေးခဲသေးသေးလေးဟာ ရုတ်တရက်ပြုတ်ထွက်သွားပြီး တ နေရာမှာသွားပိတ်ရင် အ သ က်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။သဘောကဗျာ အဲ့ဒီသွေးခဲလေးဟာ နှလုံးသွေးကြောမှာသွားပိတ်ရင် heart attack ရုတ်…
ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ရသော အကျိုး (၈) မျိုး(အမြဲဘုရားရှိ ခိုး တယ်ဆိုရင် ဝင်ဖတ်ကြည့်နော်)
July 20, 2021 Bestie_Author
ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့အချိန်ဖြုန်းတဲ့ အလုပ် မဟုတ်ဘူး။တစ်နေ့လုံးသုံးဖို့ စိတ်တန်ခိုး ထုတ်လုပ်တာ။စိတ် ဓါတ်ဆီ ထည့်တာ။စိတ် စက်ဆီ ဖြည့် တာ။ သန့်စင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်အောင် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရေနဲ့ ဆေးတယ်လို့မှတ် စက်ကရိယာတွေကို ဆေးကြောသန့်စင်တယ်လို့ စိတ် ထဲ မှာ နှလုံးသွင်း ထား။ ဘုရားရှိခိုး တာ၊ဘုရား ဂုဏ်တော် ပွားတာ၊မေတ္တာပို့ တာ၊ထွက်လေဝင်လေ စူးစိုက်ပြီးမှ ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ် တရားထိုင် တာဟာ ကျန်းမာရေး အတွက်လည်းကောင်း၊စိတ်ခွန်အား လဲကောင်း၊စိတ်ကြံခိုင်ရေး လဲတိုးတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ခွန်အား တိုးတက်၊ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံခိုင်ရေး လဲတိုးတက် အကုန်လုံး အကောင်းတွေချည်းပါပဲ။ ဘုရားရှိခိုး ပူဇော်ရသော အကျိုး ၈ မျိုး ၁။သွားလေရာရာ ရောက်လေရာ အရပ် ၁၀ မျက်နှာတို့၌ အပူဇော် အချီးမြှောက်ကို ခံရခြင်း။ ၂။သွက်သွက်လက်လက်နှင့် ထက်မြတ်သော ဉာဏ်ပညာကို ရရှိ ခြင်း။ ၃။ကိုယ့်အလိုလိုက်ပြီး ကိုယ့်အကြိုက်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ပေးကြသော အခြွေအရံ ပရိသတ်နှင့်ပြည့်စုံရ ခြင်း။ ၄။မရေမတွက်နိုင်သော စည်းစိမ်ချမ်းသာနှင့် ပြည့်စုံ ခြင်း။ ၅။ဘဝတိုင်း ဘဝတိုင်း အဆင်းရုပ်ရည် လှပ ခြင်း။ ၆။ကိုယ်လှ စိတ်လှ…
ဒီ ဝဋ်ကြွေး ၁၉ ချက်အကြောင်းကို သိထားတဲ့သူ တွေ တိုင်း အကုသိုလ်အလုပ်ကို တော်တော်ကြော က်သွား ပါလိမ့်မယ်
July 18, 2021 Bestie_Author
ဒီ ဝဋ်ကြွေး ၁၉ ချက်အကြောင်းကို သိထားတဲ့သူတွေတိုင်း အကုသိုလ်အလုပ်ကို တော်တော်ကြောက်သွားပါလိမ့်မယ် ဝဋ်ကြွေး ၁၉ချက်အကြောင်းသိကောင်းစရာများကို (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဖတ်သင့်တဲ့ဗဟုသုတလေးပါ) ၁. ဒီဘဝမှာ လက်ဝတ်ရတနာများ နှင့် အဝတ်ကောင်းများဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက သင်ဟာ သံဃာတော်များအား သင်္ကန်းကပ်လှု ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ၂. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အစားအသောက်ကောင်းများဖြင့် နေရပါသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက ဆွမ်းလှူ ခြင်း၊ မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်း လှု ဒါန်း ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည် ၃. ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝမှာ ဆင်းရဲပြီး အဝတ်ကောင်းတွေ မဝတ်နိုင်ရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက နှမြောတွန့်တိုခြင်း၊မစ ္ဆရိယစိတ်များ၍ ပေး ကမ်းခြင်း လှူ ဒါန်းမှုမရှိခြင်း၊ အလှူ မလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည် ၄. ဒီဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ကြီး ခြံကြီးများနှင့် နေနိုင်ခြင်းဟာအရင်ဘဝက ဒါနကောင်းမှုအစုစုနှင့် ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ အကူ အညီ ဆန်စသည့် ပစ္စည်းဝတ္ထု အလှုပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည် ၅. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ တိုးတက်အောင်မြင်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက သူတော်ကောင်းများနေထိုင်ရာ အ ဆောက်အဦးဆောက်ဖို့ ငွေလှုဒါန်းခြင်း၊ပစ္စည်းလေးပါးလှူ ဒါန်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည ၆. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ…
မြတ်စွာဘုရားက မကျန်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင် ဒီတရားငါးမျိုး နှလုံးသွင်းပါတဲ့။ နံပါတ်(၁)က …ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး မတင့်မတယ် ရွံစဖွယ်ကောင်းတယ် ဆိုတာကို မပြတ် ဆင်ခြင်ပေးပါ။ နံပါတ်(၂)ကကိုယ်စားတဲ့အစာအာဟာရတွေရဲ့စက်ဆုပ်ဖွယ် အခြေအနေတွေကို မပြတ် စဉ်းစားပေးပါ။ နံပါတ်(၃)………….လောကကြီးရဲ့ပျော်ရွှင်စရာ ကင်းမဲ့နေပုံကိုဆင်ခြင် စဉ်းစားပေးပါ။ နံပါတ်(၄)ကသင်္ခါရမှန်သမျှဘယ်အရာမှ မမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသညာကို ဆင်ခြင်ပေးပါ။ နံပါတ်(၅)ကသေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်သညာတစ်ခု၊ကိုယ့်ရဲ့သေခြင်းပဲဖြစ်စေ၊ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ သေဆုံးခြင်းပဲဖြစ်စေ သေဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိ သံဝေဂ အသိဉာဏ် အမြဲတမ်း ဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်စဉ်းစားပေးပါလို့ဟောကြားတော်မူတာဖြစ်တယ်။ ဒီနှလုံးသွင်းတရားငါးမျိုးဟာ မကျန်းမာသူတွေအတွက် အထူးလိုအပ်တဲ့ နှလုံးသွင်းတရား ကမ္မဋ္ဌာန်းငါးခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာ။ ခုလို ကမ္မဋ္ဌာန်းငါးမျိုးကို နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကြီးမားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိနိုင်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားက ဘယ်လောက်ထိအောင်ဟောတုန်းဆိုလို့ ရှိရင် … ဒီလိုသာ မှန်မှန်ကန်ကန် နှလုံးသွင်းပြီး ဒီတရားငါးမျိုး သူ့သန္တာန်မှာ ပြည့်ပြည့်ဝဝကြီး ရှိမယ်ဆိုရင် …သူဟာ မသေခင်မှာရဟန္တာကြီး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဟောတယ်။ ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာ လောဘတွေ ကင်းသွားတာ၊ဒေါသတွေ ကင်းသွားတာ၊မောဟတွေ ကင်းသွားတာကိုဆိုလိုတယ်။ အဲဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေလုံးဝကင်းစင်ပြီး စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့အဖြစ်ကို ရရှိနိုင်တယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာသာ ဖြစ်တယ်။ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ၊ ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ ပါချုပ်ဆရာတော် တရားမှတ်စု KhinSandarSoeHtut
ကပ်ရောဂါကြီးတွေ ဘေးက လွတ်မြောက်စေဖို့ နည်း လမ်း တွေပေးခဲ့တဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး
၁)။ သူ တကာတွေ လောဘကြီးသော်လည်းမိမိက #လောဘမကြီးအောင်နေပါ။ ထိုသို့နေလျှင် သူတကာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း (ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရာယ်)ဘေးသင့်ရောက်သော်လည်း မိမိမှာထိုဘေးမှ လွတ်မြောက်မည်။ (၂)။ သူတကာတွေ ဒေါသကြီးသော်လည်းမိမိက #ဒေါသမကြီးအောင်နေပါ။ ထိုသို့နေလျှင် သူတကာ လက်နက်ဘေးဆိုး အန္တရာယ်(သတ္တန္တရကပ်)ဆိုက်ရောက်သော်လည်းမိမိမှာ ထိုဘေးမှ လွတ်မြောက်မည်။ (၃)။ သူတကာတွေ မောဟကြီးသော်လည်းမိမိက မောဟမကြီးအောင်နေပါ ထိုသို့နေလျှင် သူတကာ အနာရောဂါ ဘေးဆိုး(ရောဂန္တရကပ်)ဆိုက်ရောက်သော်လည်းမိမိမှာ ထိုကပ်ဘေးမှ လွတ်မြောက်မည်။ လွတ် မြောက် မည်။ ဤကား ကျေးဇူးတော်ရှင်မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အမြဲမပြတ် ဆိုဆုံးမလေ့ရှိသော သြဝါဒ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ယခု မျက်မှောက် အချိန်အခါသည်ကား ထိုသြဝါဒအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရန် အချိန်တန်နေပြီဖြစ်၍ … (၁)။ လောဘမကြီးရန် မိမိတတ်နိုင်သမျှစွန့်ကြဲ ပေးကမ်း လှူဒါန်းပါ။ (ဒါန၊ စာဂ) (၂)။ ဒေါသမကြီးရန် သတ္တဝါအားလုံးတို့အား မေတ္တာတရား ပွားများပို့သပါ။(မေတ္တာ ဘာဝနာ) (၃)။ မောဟမကြီးရန် ရုပ်နာမ်ဓမ္မ သင်္ခါရတို့၏ အနိစ္စ ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ သဘောကိုအချိန်ရသမျှ ဆင်ခြင်ပါ။ (ဝိပဿနာဘာဝနာ) တိပိဋကဓရ၊တိပိဋကကောဝိဒ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိကကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး။ (((( ဒီ Post လေးက အသုံးဝင်တယ် ဆိုရင်Share တစ်ချက်…
တော်တန်ရုံအဖျားနဲ့ virus ပိုး မကူးနိုင်ပဲ ကိုယ်ခံစွမ် းအားတွေ ပိုကောင်းဖို့ ကြက်သွန်သံပုရာစမ်းသုပ်
July 13, 2021 Bestie_Author
ဒီရက်ပိုင်း ကြက်သွန်သံပုရာစမ်းဆားလေးနဲ့ သုပ်ကို နေ့တိုင်းလေး စားဖြစ်နေတယ်။ တော်တန်ရုံ အဖျားနဲ့ virus ပိုး မကူးနိုင်ပဲ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေ ပိုကောင်းလာသလို ခံစားရတယ်။ အားလုံး စားကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ သုပ်စားတော့မယ်ဆို ကြက်သွန်နီကို အခွံခွါ၊ ဖင်နဲ့ခေါင်းကို ဒါးနဲ့ ဖြတ်ပြီး အကွင်းလေးတေလှီးပြီး ပန်ကန်ထဲ ထ ည့်ပါ။ တော သံပုရာသီးလေးကို ရေးဆေးပြီး တခြမ်းခွဲပြီး ကြက်သွန်ပေါ် အရည်ညစ်ချပါ။ ဆားလေးသင့်ရုံဖြူးပြီး စားလို့ရပါပြီ။ အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုပ်သီးစိမ်းလေး ကြိုက်သလောက် ကပ်ကြေးလေးနဲ့ ကို က်ထည့်ပါ။ကြ က်သွ န်ကို အခွံနွှာပြီး တစ်ခြမ်းခွဲပြီး ရေဆေးလိုက်ရင် အာနိသင် လျော့သွားတယ် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် တစ်ခြမ်းခွဲပြီး ရေမဆေးပါနဲ့။ အပန်းမကြီး မခက်ခဲတာမို့ ပြုလုပ်သုံးဆောင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ ထူးခြားမူကို တကယ်ထိတွေ့ ခံစားရမှာပါ။ကြက်သွန်နီသံပုရာဆမ်းကိုစားသုံ းပေ းခြင်းဖြင့် (၁) ကိုယ်ခံအားကို မြင့်တက်စေမည်။ (၂)လေထဲတွင်ကူးစက်နိုင်သော တုပ်ကွေးစသည့်ရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ (၃) ပိုးမွှားများကို သေစေနိုင်ပါသည်။ (၄) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါများကို သက်သာစေပါသည်။ (၅) ဂျိုင်းနံ့ဆိုးသူများ၊ ခံတွင်းနံ့ဆိုးသူများကို သက်သာစေပါသည်။ (၆) အိမ်ထောင်သည်များအတွက် ခွန်အားကို တိုးပွါးစေပါသည်။ (၇)…
ဒီအချိန်မှာ ကားတွေ အိမ်တွေ ဘယ်လောက်စျေး ပေါ ပေါ မဝယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ဖတ်ကြည့်ပါ
July 12, 2021 Bestie_Author
ချစ်လို့ပြောတယ်မှတ်ပါ။ ဒီအချိန် စျေးဘယ်လောက်ပေါပေါ ကားမဝယ်နဲ့။ အိမ်ခြံမြေ မဝယ်နဲ့။ အဝတ်အစား မဝယ်နဲ့။ ဖုန်း laptop စတာတွေ မလိုပဲ မဝယ်နဲ့။ အိမ်သုံး ပစ္စည်းတွေ မလိုပဲ မဝယ်နဲ့။ မုန့်တွေ တစ်ရက်တစ်ရက် သောင်းဂဏန်း လျှောက်ဝယ်မစားနဲ့။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ငွေမချေးနဲ့။ အပေါင်မခံနဲ့။ အကောင်းဆုံးက ထမင်းနဲ့ဟင်း ချက်စရာက လွဲရင် ကျန်တာ ဘာမှ မဝယ်နဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုဆို stay home ကာလထပ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက် ကျတော်တို့မှာ ဝင်ငွေမရှိဘူး။ အဲ့အတွက် ထွက်ငွေကို တတ်နိုင်သမျှ နဲအောင်ကြိုးစားရမယ်။ လုပ်ငန်းတွေ ပြန်စရမယ့်အချိန် လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိနေမှရမယ်။ ကိုယ်ပိုင်ငွေ ပမာဏကို နဲနဲမှ အပွန်းမခံပါနဲ့။ လူသားခြင်းစာနာစိတ်အရ လှူတာကလွဲရင် ပိုက်ဆံမသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါ။ တကယ်လို့ လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့အလုပ်က ပြန်စလို့ရတဲ့အထဲမှာမပါဘူးဆိုရင် ကျတော်တို့ အလုပ်အသစ်လုပ်မှ ရမှာပါ။ အဲ့ဒီအခါ ငွေကပိုပြီး လိုပါလိမ့်မယ်။ အစိုးရထံကနေ ချေးငွေမရနိုင်သလို ဘယ်သူ့ဆီကမှလဲ ငွေချေးလို့ရဖို့ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့် ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီအချိန် သင်စျေးပေါလှပြီထင်နေတဲ့အရာဟာ နောင်တချိန်မှာ ဒီထက်စျေးပေါလာနိုင်သေးတဲ့အတွက်ပါ။ (((( ဒီ…
Mask N95 ကို ၃ နာရီ ဆ က်တို က် မတပ်ပါနှင့်..၃ နာရီ ကျော် လျှင် ဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာ နာရီဝက်ခန့် Mask ဖွင့်ပြီး နားပါ
July 5, 2021 Bestie_Author
Mask N95 ကို ၃ နာရီ ဆက်တိုက် မတပ်ပါနှင့်..၃ နာရီ ကျော် လျှင် ဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာ နာရီဝက်ခန့် Mask ဖွ င့်ပြီး နားပါ…………အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၃ နာရီကျော် ဆက်တိုက် တပ် ထားလျှင် သွေးထဲမှာ အောက်စီဂျင် နည်းပြီး အက်စ စ်ဓာတ် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်….. အဲ့လိုဖြစ်လာလျှင် မူးဝေ လာတတ်ပါသည်…..၃ ထပ်ပါ အပြာအစိမ်း Mask တွေ သည် ၄ နာရီ တစ် ကြိမ်…ပိတ် စ နှင့် ပြုလုပ်ထာ းသော Ma sk သည် ၄ နာရီ တစ်ကြိမ် ဖွင့်ပြီး ဘေးကင်းသောနေရာတွင် အသက်ရူ ရပါသည်……သွေးထဲအောက်စီဂျင် နည်းပြီ အက်စစ်ဓာတ် ဖြစ်ပေါ်ပြီး အသက်ရူမဝဘဲ သေတတ်သည် ။ Credit Dr.Zyinkey (((( ဒီ Post လေးက အသုံးဝင်တယ် ဆိုရင် Share တစ်ချက် လုပ်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါ ))))မူရင်း ရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။ Photo Credit to Owners…
သင့်ကို လူချစ်လူခင်ပေါစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း ( မေတ္တာပို့နည်း
မေတ္တာပို့နည်းသင် နံနက် အိပ်ယာထလို့ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ရေကို စကိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက် နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ ..အဲ့လိုဘဲ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသ ပ်ချ ..သံဃံ သရဏံ ဂစ္ စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချပါ ..(ဆိုလိုတာကတော့ မေတ္တာမပို့မှီ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အရင်ရွတ်လိုက်ပါ) အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ သွားတိုက်ချင်တိုက်ပါ သွားတိုက်ရင်း စိတ်ထဲကဂုဏ်တော် ကိုးပါးကိုရွက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ် ..ကိုယ်ပြေ ာတဲ့စကား အောင်စေပါတယ် ..သွားတိုက်ပြီးလို့ ရေကို ထပ်ကိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်ပထမဆုံး – မိမိကိုယ်မိမိဆုတောင်းပါ –ဤရေ အေးမြသလို အကျွနိုပ်လည်းအေးမြပါစေ)မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချပါ ..အဲ့ဒါပြီးရင် သင်အချစ်ဆုံးသူကို မေတ္တာပို့ပါ (ဤရေ အေးမြသလို ………… လည်း အေးမြပါစေ)မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချပါ ..ကိုယ်မေတ္တာပို့တဲ့သူရဲ့ မျက်နှာကို စိတ်ထဲမှာ မြင်နေရပါမယ် ..ပြီးရင် ကိုယ် မျက်နှာကိုသပ်ချတဲ့ ရေရဲ့ အေးမျှမှုကို သတိပြုရမယ် ..ပြီးရင် သင့်မိသားစု မိဘများကို မေတ္တာပို့နိုင်ပါတယ် (ဤရေ အေးမြသလို ရှေးရှေးဘဝများမှ ယခုဘဝတိုင်အောင်တော်စပ်ခဲ့ဖူးသော အမိအဖဆွေမျိုးများအားလုံး…